Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Kaarka caafimaadka ee COVID-19 hadda waa qasab gudaha Talyaaniga
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Loo maleeyay inay tahay aalad lagu diiwaangeliyo xaaladda COVID-19 ee qofka iyo tallaalada si loo fududeeyo safarka, shahaadooyinka caafimaadka coronavirus ayaa horay loogu soo bandhigay dalal badan oo EU ah.
Talyaanigu hadda wuxuu u baahan yahay COVID-19 “Green Pass” shahaadada tallaalka dhammaan shaqaalaha qaranka.
Shaqaalaha Talyaaniga ah ee aan haysan shahaadada caafimaadka ayaa laga joojin doonaa shaqooyinkooda mushaar la’aan.
Shaqaalaha soo xaadira shaqada iyagoo aan haysan shahaado ayaa lagu ganaaxi doonaa ganaaxyo waaweyn oo u dhexeeya 600 ilaa 1,500 Euro.
Shahaadada COVID 'Green Pass' ayaa qasab ku noqon doonta dhammaan shaqaalaha Talyaaniga, sida ku cad qorshe cusub, oo ay ansixisay dowladda Talyaaniga maanta.
Qorshahan, oo ay maanta ansixisay dawladda Talyaanigu, oo ay si weyn u taageereen Golaha Guurtida Talyaaniga (oo ay u codeeyeen 189, iyada oo keliya 32 ay diideen iyo laba ka aamustay) ayaa lagu wadaa in la horgeeyo mooshinka Oktoobar 15keeda.
Qorshaha cusub, oo arki doona kuwa aan kaarka haysan fasax la saaro fasax la'aan, ayaa sii jiri doona ilaa ugu yaraan dhammaadka sannadkan.
Laga bilaabo Oktoobar 15, dhammaan shaqaalaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Talyaanigu waa inay helaan a COVID-19 'Green Pass' caddeyn.
Kuwa ku guuldareysta inay soo saaraan shahaadada marka la codsado waa laga joojin karaa shaqooyinkooda kadib mudada nimcada ee shan maalmood, inkastoo aan la eryi karin.
"Waxaan u fidineynaa waajibka kaarka cagaaran adduunka oo dhan ee shaqada, kuwa guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxaanna u sameyneynaa laba sababood oo muhiim ah: inaan meelahan ka dhigno kuwo nabdoon iyo inaan ololeheena tallaalka xitaa ka sii xoojinno," ayuu yiri wasiirka caafimaadka Roberto Speranza ayuu yiri.
Shaqaalaha aan haysan shahaado COVID-19 oo sax ah oo weli ku dhiirran inay ka soo muuqdaan shaqada waxaa lagu qaadi karaa ganaaxyo waaweyn, oo u dhexeeya € 600 illaa € 1,500 ($ 705 illaa $ 1,175). Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha ayaa la filayaa in si rasmi ah loo soo bandhigo dhawaan.
Bishii Agoosto, Italy wuxuu kaarka ka dhigey mid shardi ah in la booqdo goobaha dadweynaha, sida maqaayadaha iyo baararka, ka dibna laga dhigo mid khasab ku ah macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee qaybta dawladda horaantii bishaan. Hadda, waxay noqotay waddankii ugu horreeyay ee reer Yurub ah ee ka dhiga shahaadada mid khasab ku ah dhammaan shaqaalaheeda.